सोमबारबाट कोभिड खोप कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र पत्रकारलाई दिइँदै #Covidvaccine • Health News Nepal
कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण र परिचयका आधारमा हुनेछ ।
काठमाडौं, २४ माघ २०७७
कोरोनाबिरुद्धको खोप अव कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी र पत्रकारले पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज नयाँ निर्णय गर्दै सोमबार देखि कुटनीतिक नियोगका विदेशी कर्मचारी, तिनका आफन्त, त्यहि कार्यरत नेपाली कमर्चारी र पत्रकारलाई दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो।
डा. गौतमका अनुसार ‘कुटनीतिक नियोगका विदेशी कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने नै थियो । त्यहाँ कार्यरत नेपाली कर्मचारीलाई पनि सो सुविधा यसैपटक दिने निर्णय भयो । यस्तै पत्रकारहरु पनि जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने भएकोले उहाँहरुलाई पनि दिने निर्णय भयो।
प्रवक्ता डा . गौतमले भने त्यसको लागि मन्त्रालयले उपत्यकाका चारवटा अस्पताल तोकेको छ । शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल र पाटन अस्पताल अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सकिनेछ ‌।
कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण र परिचयका आधारमा हुनेछ । यस्तै पत्रकारहरुको सूचना विभागको प्रेस पास देखाएर पनि लगाउन सकिनेछ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा प्राप्त १० लाख डोज कोभिसिल्डबाट ४ लाख ३० हजार जना फ्रन्टनाइनरलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर अनुमान गरेभन्दा झण्डै ५० प्रतिशत कमले खोप लगाएपछि सरकारले त्यहि खोप कुटनीतिक नियोग र पत्रकारलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Covishield vaccineDr.jageshor gautamHealth journalist